Me indray ... ady lehibe faharoa
fanontaniana Me indray ... ady lehibe faharoa
2 taona 1 volana lasa izay #278 by PAYSON
Ahy indray izany. Fotsiny aho spitballin 'ary nanontany tena raha toa ka misy ny mbola natao ny andrana manao ny ady lehibe faharoa fizarana. Amin'ny ankapobeny, tsy nisy nanana ny fahatsapana ny fiaramanidina na fiaramanidina avy ny vanim-potoana. Mety angamba ho manontolo fanandramana vaovao, mankany aoriana eny rehetra izao, ary avy eo dia avy mạch 2 - 3, ka hankafy ny fahatsapana ny fipetrahana iray efa tranainy / fisaka lehibe ambony fa tsy ny fipetrahana Mucho / fasto eo amin'ny zorony miravaka ny. I ankehitriny dia ho hisy hanana manana kely mitondra sambo. (Ny Corsair ananantsika ankehitriny dia be dia be ny voly. Manana bato vy modely ny iray amin'ireo tetika loko.)
2 taona 1 volana lasa izay #288 by Gh0stRider203
Aho 1000% izay manohana izany!
2 taona 1 volana lasa izay #297 by PAYSON
Ny arivo isan-jato? !!!!!? WOW, dia tsy maintsy ho zavatra manaraka COMIN 'NY LALANA!, -]
2 taona 1 volana lasa izay #328 by Gh0stRider203
Eny I ankamaroany manidina jumbos noho ny VA .... fa ny Fitiavako ny ady lehibe faharoa Vorona